Globle Media: सत्यको कसीमा, तथ्यको खोजी ! ज्योति गुरूङको ‘परदेशी छोरी’ तीज गीत सार्वजनिक
काठमाडौं । गायिका सुनिता दुलालको स्वरमा सजिएको ‘परदेशी छोरी’ बोलको तीज गीत सार्वजनिक भएको छ ।
ज्योति गुरुङको शब्द रहेको उक्त गीत जे.जी. क्रियसन युट्युब च्यानलमार्फत बिहीबार सार्वजनिक भएको हो । सो गीतमा सुरज लामिछानेको संगीत रहेको छ । मालाश्री रेकर्डिङ स्टुडियोमा रेकर्ड भएको गीतको संगीत संयोजन पनि लामिछाने नै गर्नुभएको हो । गीतको भिडियोलाई लण्डनको Alperton मन्दिरमा छायांकन गरिएको हो । कुशल श्रेष्ठको निर्देशन, सम्पादन तथा छायाँकन रहेको उक्त भिडियोमा सरु तेन्याङ रानाले नृत्य निर्देशन गर्नु भएको छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, साउन १६, २०७८, २३:५१:००